အူဇီ - ဝီကီပီးဒီးယား
အူဇီ(အစ္စရေးဘာသာဖြင့်= עוזי‎ ) စက်ကလေးသည် ၎င်း၏ သေးငယ် ပေါ့ပါးပြီး ပစ်အား ကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ သောသေနတ် ဖြစ်သည်။ အစ္စရေး နိုင်ငံမှ Uziel Gal က ၁၉၄ဝနှောင်းပိုင်း တွင် ဒီဇိုင်း ထုတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၈တွင် အစ္စရေး ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းစက်ရုံက ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၄၈ မှ ယခု အထိ
တစက္ကန့် မီတာ ၄၀၀
၁၀၊ ၁၆၊ ၂၀၊ ၃၂၊ ၄၀၊ ၅၀ တောင့်ဝင်
ဗိုလ်ကြီး Uziel Gal
အူဇီအား ဗိုလ်ကြီး(နောင်တွင် ဗိုလ်မှူး) Uziel Galမှ ၁၉၄၈ အာရပ်-အစ္စရေး စစ်ပွဲ အပြီးတွင် စတင် ဒီဇိုင်း ဆွဲခဲ့သည်။ ထို့နောက် အရည်အသွေးအား အကဲဖြတ်ရန် အစ္စရေးစစ်တပ်သို့ တင်သွင်းခဲ့ သည်။ အူဇီ၏ ရိုးရှင်းသော ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှု စရိတ် သက်သာမှု တို့ကြောင့် အခြားသော ရှေးရိုး ဒီဇိုင်းများအား ကျော်ဖြတ် ရွေးချယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ Galသည် ထိုစက်ကလေးအား သူ၏ အမည် မပေးရန် တောင်းပန်ခဲ့သော်လည်း ပယ်ချခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ မကြာမီ ရှေးဦး မော်ဒယ်အား ၁၉၅၁တွင် လက်ခံခဲ့ပြီး ၁၉၅၆မှ စတင်ကာ အသုံးပြုခဲ့ရာ အောင်မြင်မှု များစွာ ရရှိခဲ့သည်။
အစ္စရေးစစ်တပ်တွင် ရှေ့တန်းထွက်ရန် မလိုသော တပ်များ၊ အရာရှိများ၊ အမြှောက်တပ်သားများ၊ တင့်ကားတပ်သားများ အပြင် ရှေ့တန်းရောက် ချေမှုန်းရေး အထူးတပ်ဖွဲ့များ ပါအသုံးပြုသည်။ ၁၉၆ရခု ၆ရက်စစ်ပွဲအတွင်း အူဇီ၏ သေးငယ်ပေါ့ပါးမှု နှင့် ပစ်အားကောင်းမှု တို့ကြောင့် ဂျော်ဒန် တပ်များ၏ ဘန်ကာများနှင့် ဆီးရီးယားတို့၏ ခံစစ်စခန်း များကို ထိရောက်စွာ ဝင်ရောက်ရှင်းလင်း နိုင်ခဲ့သည်။ အစ္စရေးတပ်တွင် ၂၀၀၃ခုနှစ် မှစ၍ အူဇီ အသုံးပြုမှု ရပ်ဆိုင်းလိုက် သော်လည်း ပြည်တွင်း ပြည်ပအသုံးပြုမှု အတွက် ဆက်လက်ထုတ်လုပ် လျက် ရှိသည်။
Micro Uzi Para
Micro Uzi Pro
Uzi with fixed wooden buttstock.
Uzi and MP 40.
Uzi used in Israel
9mm from Uzi
မြန်မာနိုင်ငံတွင် IMI၏ တရားဝင် လိုင်စင် ရယူကာ ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်း စက်ရုံများ၌ BA 94 စက်ကလေးအမည်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။ အူဇီအား အထူးတပ်ဖွဲ့များ အစောင့်တပ်များ နှင့်ကိုယ်ရံတော်တပ်များ တွင်သာ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အူဇီ&oldid=696451" မှ ရယူရန်
၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။